Dowladda Canada oo magan-gelyo siinaysa qaxooti Soomaaliyeed | KEYDMEDIA ONLINE
Dowladda Canada oo magan-gelyo siinaysa qaxooti Soomaaliyeed
Dowladda Canada oo kamid ah waddamada ay ku sugan yihiin kumannaan Qaxooti Soomaali ah ayaa sheegtay in ay dhawaan qaadaneyso Qaxooti Soomaaliyeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Dowladda Canada ayaa si rasmi ah shaaca uga qaadday in ay billaabeyso dhawaan daad-gureynta qaxooti fara badan oo Soomaaliyeed kuwaasoo ku sugan mid kamida waddamada caalamka ee u diiday in ay magan-gelyo siiso.
Canada waxa ay sheegtay in ay dib u-dejin u samaynayso in ka badan 240 Qaxooti ah oo sharci la’aan ku haysato waddanka Australia.
Qaxootigan oo u badan Soomaali, ayaa waxaa ku jira waddamo kale oo qaaradda Afrika kasoo jeeda kuwaasoo tahriib iyo dukumiintiyo been abuur ah ku galay waddankaasi, qaxootigaasi ayaa ku dayacan gudaha waddanka Australia iyo Jasiiradda Papua new guinea, kadib markii dowladda Australia u diiday in ay aqoonsi siiso.
Hay'adda Qaxootiga adduunka ee UNHCR iyo Dowladda Canada oo is kaashanaya ayaa waxay wadaan in ay qaabilaan dhammaan qaxootigaas sharci la’aanta ku ah Australia ee u badan Soomaalida sida aanu ku helnay xogta qaxootigaasi.
Soomaali farabadan ayaa u tahriibay waddamada Australia iyo Canada kaddib burburkii dowladdii dhexe ee dalka sanadkii 1991-kii, hayeeshee dowladda Australia nidaamka qaxootiga loo maro iyo in la qaabilo muhaajiriinta qaaradda Afrika kaga imaanaysa waddankaasi ayaa ah mid aad u adag.
Waddanka Canada waxa uu kamid yahay waddamada sida wanaagsan usoo dhaweeyay qaxootiga qaaradda Afrika, gaar ahaan Soomaalida oo lagu abaal mariyay mid kamida muhaajiriintii waddankaasi gaaray inuu noqdo wasiirka qaxootiga, taasi oo muujineysa sida Canada ay uga duwan tahay waddamada kale ee caalamka.